Exodus 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Wofii ase dii Twam no (1-28)
Wɔmfa mogya mfa apongua no ho (7)7)
Ɔhaw 10: wokum abakan biara (29-32)
Wɔn akwantu no mfiase (33-42)
Mfe 430 no awiei (40, 41)
Twam no ho ahyɛde (43-51)
12 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron wɔ Egypt asaase so sɛ: 2 “Bosome yi bɛyɛ abosome no nyinaa mfiase. Ɛbɛyɛ afe no mu bosome a edi kan ama mo.+ 3 Monka nkyerɛ Israel asafo nyinaa sɛ, ‘Bosome yi da a ɛto so du no, abusua biara mpɛ oguan+ baako mma wɔn agya fi, kyerɛ sɛ, ofi biara mpɛ oguan baako. 4 Na sɛ ofi no mufo sua sɛ wɔn nkutoo bɛwe oguan baako a, wɔne wɔn a wɔte bɛn wɔn* no nkyɛ wɔ wɔn fi, sɛnea nnipa* a wɔwɔ hɔ dodow te. Mummu wɔn dodow ano nhu dodow a ɛbɛso obiara, na monkyɛ oguan no mma ɛnso obiara so. 5 Momfa onini a wadi afe a ɔte apɔw;+ ebetumi ayɛ oguan ba anaa apɔnkye ba. 6 Momfa aboa no nsie nkosi bosome yi da a ɛto so 14,+ na Israel asafo mu no nyinaa nkum no anwummere+ a anim rebiribiri.* 7 Na ofi biara a wɔbɛwe wom no, wɔmfa mogya no mfa apongua no nnua abien a ɛwɔ nkyɛnkyɛn no ne nea ɛwɔ atifi no ho.+ 8 “‘Wɔnwe nam no anadwo no ara.+ Wɔmfa ogya ntõtõ na wɔmfa nka paanoo a mmɔkaw* nnim+ ne nhaban a ɛyɛ nwene ho nni.+ 9 Ɛnsɛ sɛ mowe no amono, na ɛnsɛ sɛ mode nsu noa; mmom momfa ogya ntõtõ. Montõtõ ne ti ne ne nan* ne ne yam ade nyinaa. 10 Munnnyaw bi mmma ade nnkye so, na sɛ ebi ka ma ade kye so a, momfa ogya nhyew.+ 11 Munni no saa kwan yi so: Mommɔ abɔso* na monhyɛ mpaboa; momfa poma nkura na munni no ntɛmntɛm. Ɛyɛ Yehowa Twam. 12 Efisɛ mɛba abɛfa Egypt asaase so anadwo yi akunkum Egypt mmakan nyinaa, efi onipa so kosi aboa so.+ Na mebu Egypt anyame nyinaa atɛn.+ Mene Yehowa. 13 Na ofi biara a mowɔ mu no, mogya no bɛyɛ sɛnkyerɛnne ama mo. Sɛ mihu mogya no a, metwam akɔ, na sɛ mede ɔsɛe ba Egypt asaase so a, ebi renka mo.+ 14 “‘Monyɛ biribi mfa nkae saa da yi wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu; munni no sɛ Yehowa afahyɛ. Munni saa ahyɛde yi so afebɔɔ. 15 Ɛyɛ a momfa nnanson nni paanoo a mmɔkaw nnim.+ Da a edi kan no, munyi mmɔkaw biara mfi mo afi mu, efisɛ onipa* biara a obedi ade a mmɔkaw wom fi da a edi kan kosi da a ɛto so ason no, wobekum* no afi Israelfo mu. 16 Da a edi kan no monyɛ nhyiam kronkron, na da a ɛto so ason no nso monyɛ nhyiam kronkron. Ɛnsɛ sɛ obiara yɛ adwuma saa bere no;+ aduan a onipa* biara bedi no, ɛno nkutoo na mubetumi ayɛ. 17 “‘Munni Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ no,+ efisɛ saa da yi na meyi mo asafodɔm afi Egypt asaase so. Mo awo ntoatoaso nyinaa mu, monkae saa da yi; munni saa ahyɛde yi so afebɔɔ. 18 Bosome a edi kan no da a ɛto so 14 anwummere kosi da a ɛto so 21 anwummere no, munni paanoo a mmɔkaw nnim.+ 19 Na ɛnsɛ sɛ wohu mmɔkaw biara wɔ mo afi mu nnanson, efisɛ obiara a ɔde mmɔkaw bɛka n’ano no, ɔhɔho oo, Israelni oo,+ wobekum no* afi Israel asafo mu.+ 20 Munnni biribiara a mmɔkaw wom. Baabi a mote biara, paanoo a mmɔkaw nnim na ɛsɛ sɛ mudi.’” 21 Ntɛm ara na Mose frɛɛ Israel mpanyimfo+ nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma abusua biara nkɔ ne nyɛmmoa mu nkoyi aboa ketewa* baako, na munkum aboa a mode bedi Twam no. 22 Afei momfa sommɛ* mmɔ ne mogya mu wɔ ɔsɛn mu na momfa mfa apongua no dua a ɛwɔ atifi ne abien a ɛwɔ nkyɛnkyɛn no ho. Mma obiara mmpue mmfi ne fi kosi sɛ ade bɛkye. 23 Ɛba saa na sɛ Yehowa bɛfa ɔman no mu kunkum Egyptfo no a, obehu mogya a ɛwɔ apongua no dua a ɛwɔ atifi ne abien a ɛwɔ nkyɛnkyɛn no ho no, na Yehowa betwam wɔ saa ɔpon no ho; ɔremma owu* no mma mo afi mu.+ 24 “Momma eyi nyɛ ahyɛde a mo ne mo mma bedi so afebɔɔ.+ 25 Na sɛ mudu asaase a Yehowa de bɛma mo no so sɛnea waka no a, monkɔ so nyɛ saa amanne yi.+ 26 Na sɛ mo mma bisa mo sɛ, ‘Adɛn nti na moyɛ saa amanne yi?’+ a, 27 monka sɛ, ‘Ɛyɛ Twam afɔre a yɛbɔ ma Yehowa; ɔno na bere a ɔrekunkum Egyptfo na oduu Israelfo afi ho wɔ Egypt no, otwaam a wamfa ne nsa anka obiara wɔ yɛn afi mu.’” Ɛnna nkurɔfo no kotow de wɔn anim butubutuw fam. 28 Enti Israelfo no kɔyɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron no.+ Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 29 Eduu anadwo dasum no, Yehowa kum Egypt asaase no so abakan biara,+ efi Farao a ɔte agua so abakan so kosi akoa a ɔda afiase* abakan so. Okum aboa biara nso abakan.+ 30 Farao ne n’ahemfi mpanyimfo ne Egyptfo a wɔaka nyinaa sɔree saa anadwo no, na nkurɔfo sui denneennen wɔ Egypt, efisɛ ofi baako mpo nni hɔ a obi anwu wom.+ 31 Ntɛm pa ara na ɔfrɛɛ Mose ne Aaron+ anadwo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsɔre na mo ne Israelfo a wɔaka nyinaa mfi me man mu nkɔ. Monkɔsom Yehowa sɛnea moaka no.+ 32 Momfa mo nguan ne mo anantwi nso nkɔ sɛnea moaka no.+ Na ɛyɛ a monsrɛ nhyira mma me nso.” 33 Afei Egyptfo no kaa wɔn so sɛ wɔnyɛ ntɛm+ mfi ɔman no mu, na wɔkae sɛ, “Anyɛ saa a, yɛn nyinaa bewuwu!”+ 34 Enti nkurɔfo no faa wɔn mmɔre a ennya nkawee, na wɔde ntama kyekyeree nea wɔfɔtɔw mmɔre wom no de sisii wɔn kɔn ho. 35 Israelfo no yɛɛ nea na Mose aka no; wobisaa nneɛma a wɔde dwetɛ ayɛ ne nea wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ, ne ntama fii Egyptfo no hɔ.+ 36 Yehowa maa nkurɔfo no nyaa Egyptfo anim dom, enti biribiara a wobisae no, wɔde maa wɔn, na wɔwerɛw Egyptfo ho.+ 37 Afei Israelfo no fii Ramese+ de wɔn ani kyerɛɛ Sukot.+ Ná wɔnam fam, na na wɔyɛ mmarima bɛyɛ 600,000; wɔankan mmofra anka ho.+ 38 Firamanfiramanfo*+ bebree nso ne wɔn kɔe, na na nguan ne anantwi ne nyɛmmoa ahorow pii nso ka wɔn ho. 39 Afei wɔde esiam a wɔafɔtɔw a wɔde fi Egypt bae no tõõ paanoo nkuruwankuruwa a mmɔkaw nnim. Nea enti a na mmɔkaw nnim ne sɛ wɔpam wɔn fii Egypt, enti wɔannya kwan anyɛ aduan a wobedi wɔ kwan so.+ 40 Mfe dodow a Israelfo de tenaa Egypt+ nyinaa si 430.+ 41 Ɛda a wodii mfe 430 wɔ hɔ no, saa da no ara na Yehowa asafodɔm no nyinaa fii Egypt asaase so kɔe. 42 Ɛbɛyɛɛ anadwo a wɔbɛyɛ biribi de akae nea Yehowa yɛ de yii wɔn fii Egypt asaase so no. Israelfo awo ntoatoaso nyinaa mu no, ɛsɛ sɛ wɔyɛ biribi de kae saa anadwo yi de hyɛ Yehowa anuonyam.+ 43 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: “Twam no ho ahyɛde ni: Ɛnsɛ sɛ ɔhɔho biara di bi.+ 44 Nanso sɛ obi wɔ akoa a ɔde sika atɔ no a, muntwa akoa no twetia.*+ Ɛno ansa na obetumi adi bi. 45 Ɔhɔho a wabɛtena mo mu, ne ɔpaani a omfi mo man mu rentumi nni bi. 46 Munni wɔ ofi baako mu. Mommfa nam no bi mmfi fie hɔ nnkɔ abɔnten baabiara, na mummmu ne dompe biara mu.+ 47 Ɛsɛ sɛ Israel asafo nyinaa di saa afahyɛ yi. 48 Sɛ ɔhɔho bi te mo mu na ɔpɛ sɛ odi Twam no bi de hyɛ Yehowa anuonyam a, ma ɔbarima biara a ɔwɔ ne fi ntwa twetia ansa na wabɛn ho sɛ ɔrebedi bi. Ɛno bɛma wayɛ sɛ okuromanni. Nanso ɔbarima biara a ontwaa twetia de, ɛnsɛ sɛ odi bi.+ 49 Mmara koro no ara na okuromanni ne ɔhɔho a wabɛtena mo mu bedi so.”+ 50 Enti Israelfo nyinaa yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron no. Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 51 Da no ara, Yehowa yii Israelfo ne wɔn asafodɔm fii Egypt asaase so.
^ Nt., “ɔne nea ɔte bɛn no.”
^ Anaa “akra.”
^ Nt., “anwummere abien no ntam.”
^ Biribi a ɛma esiam tu anaasɛ ɛma ɛkaw.
^ Anaa “nnyawa.”
^ Anaa “bɛlt.”
^ Anaa “wobetwa.”
^ Anaa “wobetwa ɔkra a ɔte saa no.”
^ Kyerɛ sɛ, oguan ba anaa apɔnkye ba.
^ Nt., “ɔhaw a ɛsɛe ade.”
^ Nt., “amoa mu; obon mu.”
^ Kyerɛ sɛ, nnipa a wɔnyɛ Israelfo a Egyptfo ka ho.
^ Anaa “dua.”